धर्मयुद्ध हुन लागेकै हो त ?
गृहमन्त्रीले नै गाई काट्ने कानुन आउन लागेको बताएपछि र गोरु काटेर खाइन्छ भन्ने नेताहरु बुर्लुक्क बुर्लुक्क उफ्रन थालेपछि साम्प्रदायिक दङ्गाको खतरा देखिएको छ । हामीलाई प्राप्त एउटा समाचार यस्तो छ –
गाई काट्ने प्रस्ताब् पारित भएको दिन नेपालमा साम्प्रदायिक युद्दको शुरूवात हुने निश्चित । तल्लो स्तरको सोच भएकाहरुलाई राष्ट्र चलाउनको लागि चुनेर पठाउनु नै हाम्रो गल्ती हो । जबसम्म जात, जाति, सम्प्रदाय भन्दा माथि उठेर नेतृत्वले सोच्न सक्दैन तबसम्म राष्ट्र समृद्धी तर्फ उन्मुख हुँदैन ।
नम्वर ३ को उपसभामुख राधिका तामाङको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाटै पुष्टि हुन्छ यिनीहरुको सोच कुन हदसम्म तल छ भन्ने ? गाईलाई यो देशको सम्विधानले राष्ट्रिय जनावर भनेर घोषित गरेको छ । नेता गाई काट्ने कुरा गर्छन् ।
संविधान मान्नुपर्ने र संविधान कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली यो सब कुरा सुनेर बसिरहेका छन् । किन ?
गाईको महात्म्यको विषयमा आज विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा समेत गाईलाई राष्ट्रिय जनावर राखेको देशमा जन्मिएकोमा गर्व गर्नुपर्नेमा गाई काटेर खानपाउनु पर्दछ भनेर वकालत गर्नु नै यिनिहरूको अल्पबुद्धीको परिचय हो । विश्वको कुन चाही देशमा राष्ट्रिय जनावरलाई खुल्ले आम काट्ने अनुमति दिएको छ ? खाने पिउने बाहेकको फरक सोच नभएका अल्पबुद्धीहरु संसदमा पुगेर पनि खाने पिउने भन्दा फरक कुरा सोच्न सकिरहेका छैनन् । गाईको विषयमा यस्तो प्रस्ताब ल्याउनेलाई पकडेर कारबाही गर्न सक्ने हिम्मत ओली सरकारले राख्न सक्नुपर्दछ । हैन सक्दैन भने हात उठाओस् कहाँ कसलाई के गर्नुपर्छ त्यो गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग पनि छ । यी हात ताली बजाउन र भात खान मात्र दिएका हैनन् हामीलाई । आफ्नो माटो, स्वाभिमान, राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्न हामीले मज्जैले जानेको छ । यति मात्र नभएर यिनलाई जनताले चुनेर पठाएको राष्ट्र विकासको रेखा खिच्नलाई हो कि वाहियात कुरा गरेर साम्प्रदायिकतालाई भड्काउनलाई हो ? गाईलाई काट्नु पर्दछ भन्ने १०५ होलान् तर गाईको रक्षा गर्नु पर्दछ भन्ने ९०५ छन् । सेन्टिमेन्टमा बगेर सरकारले भोट बैङ्कको लागि यदि कुखुरा काटे झै गरेर गाईलाई चोक चोकमा काट्ने अनुमति दियो भने पनि त्यसले समाजमा कति भयावह परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ, यसको विषयमा कसैले सोचेको छ कि छैन ? १० भोटको लागि ९० भोट को अपमान गर अनि हेर कसलाई कहाँ पुर्‍याउनु पर्दछ त्यसको निष्कर्ष जनता आफैले निकाल्नेछन ।
यसरी पो हिन्दु युवाहरु आक्रोसित हुन थालेका छन् । ओली सरकारले यसरी हिंसा फैलाउनेलाई निस्तेज, नियन्त्रण गर्न किन सकिरहेको छैन ? गाई काट्नु र माई काट्नु उस्तै हो । साँच्चै कम्युनिजम ल्याउन लागे कि कसो ओलीजी ?